कोरोनाको जोखिम बढेकाबेला उपत्यकामा अचानक के भयो ? – Online Nepal
July 4, 2020 286
काठमाडौं । ललितपुरको खोकनामा किसान र प्रहरीबीच झ डप भएको छ । स्थानीयबासीले शनिबार फास्ट ट्र्याकमा धान रोप्न थालेपछि प्रहरीले ह’स्तक्षेप गरेको थियो । उक्त क्रममा आफ्नो जमिन खनजोत गर्न गएका किसान र प्रहरीबीच भएको हो । प्रहरीले केही से’ल अश्रु’ग्यास समेत प्र हार गरेको छ । झ डपमा परी ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । खोकनावासीले सुरुआतदेखि नै फास्ट ट्रयाकको वि’रोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आफ्नो धरोहर लिएको भन्दै आ’पत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुले विकासका नाममा जग्गाजमिन र पुर्ख्यौली थातथलो क’ब्जा गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका हुन् । अधि’ग्रहणका लागि सूचना निकालेको जमिनमा खनजोत गर्न समेत नदिएपछि स्थानीयले खड्का फाँटमा संयुक्त रोपाइँ कार्यक्रम राखेका छन् ।
उक्त क्रममै प्रहरीसंग झ डप भएको हो । केही घाइते भएका छन् । काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ र मातातीर्थ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन खोकना हुँदै बनाउने तयारी रहेको भए पनि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सांस्कृतिक सहरमाथि अ’तिक्रमण गर्न नपाउने भनिरहेका छन् ।
झ डपपछि अहिले खुडोल फाँटमा स्थानीयले पुनः धान रोपेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको बाक्‍लो उपस्थिति छ । यो फाँट काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ‘जिरो किलोमिटर’हो । सो क्षेत्रको जग्गा सरकारले अ’धिग्रहण गरेको छ । तर, स्थानीयले भने मु’आब्जा लिइसकेका छैनन् । यसअघि असार १५ गते पनि प्रहरी र स्थानीयवासी वि’वाद भएको थियो । तस्विर तल हेर्नुहोस
Prevललितपुरको खोकनामा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच डरलाग्दो झडप !! (भिडियो सहित्)
Nextकाभ्रेमा आफ्नै बाबुको गर्भ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा !